Nagu saabsan - Shenzhen Sicily Technology Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2006, Shenzhen Sicily Technology Co., Ltd. waa soosaaraha tooska ah ee noocyo badan oo badbaado iyo alaabooyin ah. Waxaan ku bilownay dabka bilowga sanadkii 2016, laakiin waxaan heysanaa waxyaabo badan oo hadda ah, oo ay ku jiraan bilowga dabka, xirmada qalabka badbaadada , teendho teendhooyin, boorsada dhabarka lagu rito iyo agabka jikada lagu kariyo iwm.
Soosaarayaal ahaan, waxaan si joogto ah u aqoonsaneynaa teknoolojiyad cusub oo kafiican taas oo hagaajin karta tayada wax soosaarkeena una hogaansami doonta heerarka. Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga OEM / ODM si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Shirkadeena ayaa qadarinaysa macaamiisheeda iyo shaqaalaheeda. Sanado badan oo waxbarasho ah, waxaan helnay ku qanacsanaanta shaqaalaheena inay noqdaan mid ka mid ah darawalada ugu waaweyn ee qancinta macmiilka iyo dib u eegista wanaagsan. Shaqaalaha ku faraxsan waxay naga caawiyeen inaan xoog ku yeelano suuqa oo aan dhisno shirkad caan ku ah ku fiicnaanta adeegyada macaamiisha iyo wax soo saarka.
Teknolojiyada Sicily waxay ku shaqeysaa himilada kali ah ee bixinta alaabooyin iyo adeegyo aad u wanaagsan dhammaan macaamiisheeda iyo abuurista xiriiro muddo dheer ah iyada oo loo marayo macaamil kasta oo macaamiil ah. Si loo gaaro himiladan waxaan si hagar la'aan ah u horumarineynaa una horumarineynaa badbaadada iyo agabka kaamamka
Aragtidayadu waa in la dhiso shirkad si xoog leh ugu istaagta qiimaheeda iyada oo gogol xaaraysa waxay sahmisaa jidadka cusub ee koritaanka iyo guusha iyadoo maskaxda lagu hayo khibrada macaamiisha iyo qanacsanaanta shaqaalaha.
Qiimayaasha Sicily Technology waa aasaaska dhammaan isdhexgalkayaga shaqada iyo macaamiisheenna. Macaamiil badan oo naga hadlaa waxay u arkaan qiimayaashan inay yihiin sababta ugu weyn ee aan awoodnay inaan u kobcinno sannadihii la soo dhaafay.
Dhammaan shaqaalaheennu waxay ilaaliyaan xirfad-yaqaannimo waxayna hubiyaan in macaamil kasta uu helo waayo-aragnimada ugu fiican. Xirfadlayaal ahaan, waxaan qiimeyneynaa waqtigaaga, waxaanan dadaal ugu jirnaa inaan ku siino alaabteenna iyo adeegyadeena waqti ku habboon iyo sida aad ka filaysoba.
Bilowga Dabka Bilowga, Taambuugga la buufin karo, Teendhada dusha sare ee Xtm, Teendhada Dibadda ee Joogtada ah, Bilowga Dabka Magnesium, Qalabka Badbaadinta Degdegga ah,